နောက်ဆုံး INVENTO ဘာသာဗေဒ IN catchall ရပ်တန့်ဖို့အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်
14 ဇူလိုင်လ 2018 Belz ယဉျကြေးမှု 0
ကျွန်တော်အမျိုးသမီး၏ယောက်ျားခွဲခြားဖို့ရည်ရွယ်ထောက်ခံကြောင်းဘာသာစကားကွဲလွဲချက်များတွင်, ကြားနေ၏ပါဝင်မှုမရှိဘဲ ပို. ဒေါသထွက် abet သောသူတို့အဘို့ကို virtual နားရွက်တစ်စောင်ရေရှိတတ်၏။
နှင့် .. ကျနော်တို့ကသဒ္ဒါနှင့်အတူသွားပါ။
ကျနော်တို့၌ရှိကြ၏ စပိန်နဲ့ရှေ၌ဟောပြော, တင်းမာနေ၏အနကျအဓိပ်ပါယျအဖြစ်တက်ကြွစွာ participle ရှိခြင်း။
ကြိယာတိုက်ခိုက်မှုများ၏တက်ကြွစွာ participle "ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်သူ"; ယင်းအထဲက "ဖြစ်ပါတယ်အလားအလာမြျှောမှနျးခကျြ"; သီချင်း "ဖြစ်ပါတယ်cantante"ထိုအခါတည်ရှိဖို့""တည်ဆဲ.
ဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်ente"နောက်ဆုံးမှာ" ဝိသေသလက္ခဏာရှိပါတယ်ထားတဲ့ "အဓိပ်ပာယျ"အရာဖြစ်ပါသည်"။ ကျနော်တို့ကကြိယာဖော်ပြအရေးယူယင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းမှလူတစ်ဦးနိုင်စွမ်းအမည်ကိုတဲ့အခါမှာဒါကြောင့် "အဆုံးမှထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ente"။
ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ, "ဟုချေါသညျသမတ"ထိုအခါဘယ်တော့မှ"ဥက္ကဋ္ဌ"မည်သို့ပင်ကျားမ၏ (အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး) ကိုအရေးယူလုပ်ဆောင်ရသော။
အလားတူပင်အဲဒါကို "ဟုဘုရားရှိခိုးကြောငျးငယျ"မဟုတ်ပါ" ardienta "; ဒါကြောင့် "ကပြောပါတယ်ကြောငျးသား"မဟုတ်ပါ" estudianta "; ဒါကြောင့် "ကပြောပါတယ်independiente"ထိုမျှမက" independienta "; "လူနာ"မဟုတ်ပါ" pacienta "; "ဃirigente"Dirigenta အဘယ်သူမျှမ"; "နေထိုင်သူ"မဟုတ်ပါ" Residenta "။
ငါနောက်ဆုံးမှာမသိဘဲသူတို့အားရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်, သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းဖို့ဆုံးမခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုသွားအဆိုပြု semovientes (အဘယ်သူမျှမ "ignorantas semovientas" ပင်ဓမ္မတွင်လည်းသိမ်းပိုက်).
ငါကျားမကွဲပြားခြားနားမှု၏ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆက်စပ်ခဲ့သဖြင့်, ဣတ္နဲ့ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏ဒီမိုကရေစီမှားအသိလေ့ကျင့်ခန်းမှမသိဘဲတဲ့စာတမ်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူယောက်ျား၏အုပ်စုတစုမှပါတီချရေလောင်းတော်မူပြီးမှနောင်တရ။ ဤအခွင့်အရေးကိုကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးအချို့သည်ခဲ့ကြသည်: dentistoအဆိုပါ poetoအဆိုပါ sindicalistoအဆိုပါ ငါ pediatroအဆိုပါ pianistoအဆိုပါ golfistoအဆိုပါ ငါ arreglistoအဆိုပါ ငါ funambulistoအဆိုပါ ငါ proyectistoအဆိုပါ turistoအဆိုပါ ငါ contratistoအဆိုပါ paisajistoအဆိုပါ taxistoအဆိုပါ Artistoအဆိုပါ periodistoအဆိုပါ taxidermistoအဆိုပါ telefonistoအဆိုပါ masajistoအဆိုပါ gasistoအဆိုပါ t ကိုrompetistoအဆိုပါ ငါ violinistoအဆိုပါ maquinistoအဆိုပါ electricistoအဆိုပါ oculistoအဆိုပါ Esquino ၏policío နှင့်, ရှိသမျှအထက်, အ machisto!
ငါကလည်း အကယ်. လစျြလြူရှုမဖြစ်နဲ့မျှော်လင့်အများအပြားအပြင်, ဝန်ကြီးဌာနများ၏စပီကာ, ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ, ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အကြီးအကဲများအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသောအခါကောင်းစွာနိုင်ငံရေးသမားများဒါရယ်စရာသဘောမျိုးလုပ်နေတာတက်အဆုံးသတ်ထွက်ရှိပါတယ်ရှောက်သွား, လူမှုရေးအရချမှတ်ခဲ့သကဲ့သို့သငျမပေးပါဘူး သူတို့သိသာသိုးသငယ်တစ်ဦးနောက်တော်သို့လိုက်နဲ့တူလာသောအခါဂျာနယ်လစ်များ, ဝေဖန်သုံးသပ်, ပစ္စုပ္ပန်မှားယွင်းစွာ "ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဆက်သွယ်ရေးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသိထဲမှာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ဟန်သိုးထိန်း.. သို့မဟုတ် shepherdess "မဆိုသဒ္ဒါညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ။
တိုတောင်းခုနှစ်, ဒါဟာ "ရှိခြင်းကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူးPUBLIC ရုံး"ဖြစ်ရန်အတွက်"တစ်ဦးကလူထုတာဝန်ခံ"။
"ဘာသာစကားများ, သင်္ချာဂျီဩမေတြီ, ပန်းပုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆသည်ဝါကျထဲမှာအတိအကျသောတူညီသောအယူအဆဟာထားသောစာပိုဒ်တိုများဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲဖယ်ရှားမရနိုင်ဒါကြောင့်အတိအကျဘာမျှ fit ဖို့ရှိပါတယ်။ " Josep PLA
"အဲဒီမှာကြည့်ရှုမည်မဟုတ်သောသူကဲ့သို့ဒီတော့မျက်စိကန်းသည်" .. ကျနော်တို့လည်းအများအပြားရှိသည်။
16 နိုဝင်ဘာလ 2017 5
ဒီစပိန်၌, reliquaries မေ့လျော့ပတ်သာနှင့်မုန်တိုင်းနှင့်အလင်း bolero အားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းကိုယူမထားဘူးကြောင်းကိုမှန်လျှင် "burladeros" အစဉ်အမြဲအကာအကွယ်နောက်ကွယ်မှတွေ့ဒီartículoTweet Share [ ... ]
အီဗာ Belmonte, ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏လူငယ်တစ်ဦးသတင်းစာဆရာရင့်ကျက်ဥပမာ
29 ဧပြီလ 2018 1
အများကြီးအသိအမှတ်ပြုထိုက်သူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှကြည်ညိုလေးစားမှုကိုမှအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုဤartículoTweetEva Belmonte (CIVIO) "အင်တာနက်ပေါ်ရှိစက္ကူနှင့်မြေထုဆွဲအားလှိုင်းတံပိုး၏ဒုံးကျည်များကိုအသုံးပြုတဲ့သူတစ်ဦးကအမျိုးသမီးတစ်ဦးအာဏာဦးဆောင်တဲ့" Share [ ... ]